Xukuumada Kuwait oo balan qaaday in ay caawin doonto shacabka ... | Universal Somali TV
Xukuumada Kuwait oo balan qaaday in ay caawin doonto shacabka magaalada Baladweyne
Hey,ada bisha cas ee dalka Kuwait ayaa shaaca ka qaaday in ay gargaar soo gaarsiin doonto shacabka soomaaliyeed ee waxyeelada ka soo gaartay fatahaada ka dhalatay roobka ka da'aya Dalka.
Safiirka dowlada u jooga wadanka Kuwait mudane Cabdullahi Maxammed Odowaa, oo kulan la qaatay saraakiisha sare ee hey,ada bisha cas ayaa wuxuu kaga waramay xaalada ay wajahayaan shacabka magaalada Baladweyne.
Dhanka kale dowlada carbeed ee Kuweyd ayaa balan qaaday in ay caawin doonto shacabka Soomaaliyeed dhowaan-na ay gargaar soo gaarsiin doonto dadka u Baahan.
Wadamada Jabuuti iyo Qadar ayaa diyaarado gargaar u soo diray magaalada Muqdisho si loo samatabixiyo shacabka magaalada Baladweyne oo boqolkiiba sideetan ay saameysay fatahaada roobka iyo wabiyada kaararka Jabsaday.
Dowlada Turkiga ayaa dhankeeda ka marneyn waxaana ay ugu baaqday wadamada Muslimiinta in ay ay caawiyaan shacabka Soomaaliyeed ee xiligaan qaarkood wajahaya xaalada Adag.
Ismaamulada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ayaa ka mid ah deegaanada ay ka jirto xaalada bani aadanimo inkastoo uusan ka marneyn ismaamulka Jubbaland oo qeybo ka mid ah dadka ku nool ay u baahan yihiin taageero in loo Fidiyo.
Kan-xigaSacuudiga oo dalkiisa ka tarxiilay bo...
Kan-horeDowlada Yemen iyo Mucaaradka hubeysan...
55,186,718 unique visits